[Thursday, January 31st, 13] :: Raysal wasaare Saacid iyo wafti uu hoggaaminayo oo booqasho aan la shaacin ku tagay Marka
Marka (RH) Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon iyo xubno ka tirsan golaha wasiirrada xukuumadiisa ayaa maanta oo Khamiis ah gaaray magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Ra’iisal wasaaraha iyo xubno la socday ayaa ku gaaray Marka diyaaradaha qumaatiga u kaca ee Helicopter waxaana magaalada Marka kusoo dhaweeyey mas’uuliyiinta maamulka degmada,kan gobolka,saraakiil,waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada ku dhaqan magaalada.
Wafdiga raysul wasaaraha ayaa la sheegay inuu u kuurgalayaan xaaladda amni ee degmada Marka oo ay joogaan ciidanka dowladda Soomaaliya.
Xubnaha wafdiga waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Cabdikariin Xuseen Guuleed, wasiirka gaashaandhigga Cabdixakiin Maxamuud Xaaji Fiqi, wasiirka warfaafinta Cabdulaahi Cilmooge Xiri,Wasiirka Wasaaraddda Maalliyadda iyo Qorsheynta Mudane Maxamuud Xasan Suleymaan, taliyaha booliska Jeneraal Shariif Sheekhunaa Maye, agaasimaha guud ee hay’adda nabad-sugidda qaranka, xildhibaanno iyo saraakiil ciidan.
Waa booqashadii ugu horreysay oo ra’iisal wasaare Saacid uu ku tago magaalada Marka tan iyo markii uu xafiiska qabtay bishii October sannadkii hore .
Ra'iisal wasaaraha ayaa horrey u booqday magaalada Afgooye ee gobalka Shabeellaha Hoose.
posted on Thursday, January 31st, 13